Kooxda Daacish oo qarjisay Taliyayaal Sare oo Taalibaan ah | Arrimaha Bulshada
Home News Kooxda Daacish oo qarjisay Taliyayaal Sare oo Taalibaan ah
Kooxda Daacish oo qarjisay Taliyayaal Sare oo Taalibaan ah
Bulsha:- Senior Taliban commander killed in response to IS group attack on Kabul hospital.
Taliye ka tirsan ciidamada Taalibaan ayaa la dilay markii raggiisa ay ka caabiyeen weerar ismiidaamin ah iyo weerar lagu qaaday isbitaal ku yaal caasimadda Afgaanistaan, mas’uuliyiinta ayaa Arbacadii sheegay.
Daalibaan ayaa 20 sano ku qaadatay dagaal ka dhan ah dowladdii la afgambiyay ee uu Mareykanka taageero ka hor inta aysan la wareegin gacan ku haynta Kabul bishii Ogosto.
Hadda waxa ay wajahayaan dagaal ay ku doonayaan in ay xasilooni ugu soo dabaalaan dalka Afgaanistaan, oo todobaadyadii la soo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro dhiig badan ku daatay oo ay sheegteen kooxaha iska soo horjeedaan, ee IS-Khorasan (IS-K).
Ugu yaraan 19 qof ayaa lagu dilay weerarkii Talaadadii lagu qaaday isbitaalka ugu weyn ee magaalada Kabul, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo aan magaciisa sheegin.
Xamdullah Mokhlis, oo xubin ka ahaa shabakada mayalka adag ee Haqqani iyo sarkaal ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Badri Corps, ayaa ah qofka ugu muhiimsan ee dhintay tan iyo markii ay Taliban qabsadeen Kabul.
“Markii uu helay xogta ku saabsan in Isbitaalka Sardar Daud Khan lagu weeraray, Maulvi Hamdullah (Mokhlis), oo ah taliyaha ciidamada Kabul, ayaa isla markiiba goobta u soo cararay,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan warbaahinta Taliban.
“Waxaan isku daynay inaan joojino isaga laakiin wuu qoslay. Waxaan markii dambe ogaanay inuu ku shahiiday dagaal fool ka fool ah oo ka dhacay isbitaalka,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Weerarka ayaa ku bilowday markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay meel ku dhow albaabka xarunta ka hor inta aysan dableydu weerar ku qaadin dhismaha isbitaalka.
Iyada oo qayb ka ah jawaabta, talisyada cusub ee Kabul ayaa saqafka sare ee dhismaha geeyey ciidamadooda gaarka ah diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo laga soo qabtay dawladii hore ee Maraykanku taageero ee Afqaanistaan.
War qoraal ah oo ay soo saartay kanaalada Telegram-ka, IS-K waxay ku sheegtay in “shan dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Dawladda Islaamka ay si isku mar ah u qaadeen weerarro abaabulan” goobta.
Afhayeenka Taliban Zabiullah Mujahid ayaa hoos u dhigay tirada dhimashada, isagoo sheegay in weerarka lagu hakiyay 15 daqiiqo gudaheed, taasoo ay uga mahadcelinayaan faragelin degdeg ah.
‘Nolosheennu way dhammaanaysay’
Inkastoo IS iyo Taliban labaduba ay yihiin mintidiin Islaami ah oo Sunni ah oo mayal adag, haddana waxay ku kala duwan yihiin tafatirka diinta iyo istiraatiijiyadda.
IS ayaa sheegatay afar weerar oo khasaara badan dhaliyay tan iyo markii Taliban ay xukunka la wareegeen 15-kii Ogosto, oo ay ku jiraan qaraxyo ismiidaamin ah oo lala beegsaday masaajidda Muslimiinta Shiicada ah. Kooxdu waxay u haysataa Muslimiinta Shiicada inay yihiin bidco.
Isbitaalkan oo lagu xanaaneeyo askarta dhaawacantay oo isugu jira Daalibaan iyo ciidamadii hore ee amniga Afgaanistaan, ayaa horay loo weeraray sanadkii 2017-kii, markaasoo rag hubeysan oo isku soo ekeysiiyay shaqaalaha caafimaadka ay ku dileen ugu yaraan 30 qof go’doomin saacado qaatay.
Weerarkii 2017 ayaa sidoo kale waxaa sheegtay kooxda dowladda Islaamiga ah, Taliban ayaana beenisay mas’uuliyadda.
Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay goob argagax leh Talaadadii, markii bukaannada iyo dhakhaatiirta ay isku dayeen inay isku xiraan qolal ku yaal dabaqyada sare oo ay rasaastu ka dhacday.
Haweeney ku go’doonsan isbitaalka markii uu weerarku billowday ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in iyada iyo saaxiibkeed “ay dareemeen inaan dhimaneyno, in nolosheennu ay dhammaanayso.”
“Qarax ayaa ka dhacay albaabka,” Rowana Dawari, oo ah gabayaa iyo macalin, ayaa u sheegay AFP.
“Daacish ayaa timi oo bilaabay inay toogtaan, waanu ku dhegnay. Waxaan maqalnay rasaas, muraayado jabay. Waxa aanu isku xidhnay musqul,” ayuu yidhi, isaga oo ula jeeda IS magaceeda maxalli ah.
“Kadib, Taliban ayaa timid, waxaana aragnay inay la socdaan dhakhaatiirtayada, markaa waxaan ogaanay inuu fiican yahay.”